Fiaraha-monina miaraka amin'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03 > Fikambanana miaraka amin'Andriamanitra
Nisy kristiana roa nifampiresaka momba ny fiangonany. Nandritra ny resaka, nampitahain'izy ireo ny fahombiazana lehibe indrindra azony tamin'ny vondron'izy ireo manokana tamin'ny taon-dasa. Hoy ny iray tamin'izy ireo: "Naleonay avo roa heny ny haben'ny fijanonanay". Namaly ny iray hafa: "Nametraka jiro vaovao tao amin'ny lapan'ny paroasy" isika. Isika Kristiana dia afaka mandray anjara mora foana amin'ny fanaovana zavatra izay inoantsika fa asan'Andriamanitra fa kely sisa ny fotoana natokana ho an'Andriamanitra.
Mety ho variana amin'ny iraka ataontsika sy ny lafiny ara-batana amin'ny serivisy ifotony isika (na dia ilaina aza izany) dia hevero ho zava-dehibe loatra izany ka anananay kely, raha misy, fotoana tavela hifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa sahirana ho an'Andriamanitra isika, dia afaka manadino izay nolazain'i Jesosy hoe: "Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy ianareo izay mandoa ny ampahafolon'ny kilao sy ny kesika ary ny alikaola ary ny manary ireo zavatra lehibe indrindra ao amin'ny lalàna, dia ny ny marina, ny famindram-po sy ny finoana! Fa tokony ataonao izany ary aza avela atao » (Matio 23,23).
Ireo mpanora-dalàna sy Fariseo dia niaina araka ny fenitra manokana sy hentitra tao amin'ny fanekena taloha. Indraindray isika mamaky izany ary maneso ny tsy fahamarinan'ireto olona ireto, fa i Jesosy kosa tsy naneso. Nasainy nanao izay angatahan'ny governemanta federaly izy ireo.
Ny tian'i Jesôsy dia ny hoe ny antsipiriany ara-batana dia tsy ampy, na dia ireo izay miaina eo ambanin'ny fanekena taloha aza - noteneniny izy ireo satria tsy niraharaha ireo olana ara-panahy lalindalina kokoa. Amin'ny maha kristiana antsika, dia tokony sahirana amin'ny asan'ny Ray isika. Tokony halala-tanana amin'ny fanomezana isika. Saingy amin'ny hetsika rehetra ataontsika - eny fa na ireo zavatra fanaontsika dia mifandraika mivantana amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy - tsy tokony hohalavirintsika ny antony lehibe niantsoan'Andriamanitra antsika.
Andriamanitra dia niantso antsika hamantatra azy. "Fa izao no fiainana mandrakizay hahalalan'izy ireo anao, ianao irery no Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao" (Jaona 17,3). Azo atao tsara ny manahirana ny asan’Andriamanitra izay tsy miraharaha antsika ny manatona azy. Nilaza amintsika ny zava-nitranga i Lioka rehefa nitsidika ny tranon'i Marta sy Maria i Jesosy fa "efa lasa lavitra i Marta hanompo azy" (Lioka 10,40). Tsy nisy zavatra ratsy teo amin'ilay ataon'i Marta, fa i Maria kosa nanapa-kevitra ny hanao ny zava-dehibe indrindra - mandany fotoana amin'i Jesosy, mifankahalala ary mihaino azy.
Ny fiarahamonina no zavatra manan-danja indrindra izay irian'Andriamanitra amintsika. Tiany ho fantatsika bebe kokoa izy ary handany fotoana miaraka aminy. Nanome ohatra ho antsika i Jesosy rehefa nanaisotra ny ampahan'ny fiainany hiarahana amin'ny rainy izy. Fantany ny maha-zava-dehibe ny fotoana mangina ary matetika izy dia nankany an-tendrombohitra irery mba hivavaka. Arakaraka ny maha-tonga matotra antsika amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, no zava-dehibe indrindra amin'ity fotoana mangina miaraka amin'Andriamanitra ity. Manantena ny fahatongavany miaraka aminy isika. Fantatsika ny tokony hihainoana azy hahitana fampiononana sy fitarihana amin'ny fiainantsika. Vao haingana aho no nihaona tamina olona iray nanazava tamiko fa nanambatra ny firaisana mavitrika amin'Andriamanitra sy amin'ny fanatanjahantena ara-batana izy ireo - ary io karazana fandefasana vavaka io dia hanova ny fiainam-bavaka. Nandany fotoana niaraka tamin'Andriamanitra nandeha izy - na teo amin'ny manodidina azy na teo amin'ny hakanton'ny tontolo voajanahary, nivavaka fony izy nandeha.
Raha ataonao loha laharana ny fiarahana amin'Andriamanitra, dia ny fikarakarana ny zavatra maika eo amin'ny fiainanao no toa mikarakara tena. Rehefa mifantoka amin'Andriamanitra ianao, dia manampy anao hahatakatra ny laharam-pahamehana amin'ny zavatra hafa rehetra. Mety sahirana amin'ny asa aman-draharaha izy ireo ka tsy miraharaha ny hiresaka amin'Andriamanitra sy ny fotoana hiarahany amin'ny hafa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha reraka tanteraka ianao, karazana fandoro ny labozia mifampitohy amin'ny lafiny roa ary tsy hainao ny manao ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainana, dia angamba ianao tokony hijery ny sakafonao ara-panahy.
Mety hodorana sy tsy misy pentina ara-panahy isika satria tsy mihinana karazana mofo mety. Ny karazana mofo horesahiko dia tena ilaina amin'ny fahasalamantsika sy ny fahavelomantsika ara-panahy. Ity mofo ity dia mofo avy any an-danitra - raha ny marina dia tena mofo mahagaga izy! Io no mofo natolotr'i Jesosy ho an'ny Jiosy tamin'ny taonjato voalohany. Vao avy nanome sakafo ho an'ny olona 5.000 i Jesosy (Jaona 6,1-15). Nandalo teo amboninny rano fotsiny izy ary ny dahalo dia mbola nangataka famantarana hino azy. Hoy izy ireo tamin'i Jesosy: «Ny razanay nihinana mana tany an-efitra, araka ny voasoratra (Salamo 78,24): Nomeny mofo avy any an-danitra hohaniny » (Jaona 6,31).
Namaly i Jesoa hoe: «Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: tsy i Mosesy no nanome ny mofo avy tany an-danitra fa ny Raiko no manome anao ny tena mofo avy any an-danitra. Satria ity no mofo avy any an-danitra, izay manome fiainana ho an'izao tontolo izao » (Jaona 6,32-33). Rehefa avy nangataka tamin'izy ireo i Jesosy mba hanome azy ireo mofo dia hoy izy: «Izaho no mofon'aina. Izay manatona ahy tsy mba noana; ary izay mino ahy tsy hangetaheta intsony » (Jaona 6,35).
Iza no mametraka mofo ara-panahy eo ambony latabatra ho anao? Iza no loharanon'ny herinao sy ny herinao rehetra? Iza no manome dikany sy misy dikany amin'ny fiainanao? Ianao ve maka ny fotoana hahalalanao ny mofon'ny fiainana?